Sheekadii Shillinka Iyo Ictiraafka Soomaliland Xaggee Iska Shabahaan? – somalilandtoday.com
Sheekadii Shillinka Iyo Ictiraafka Soomaliland Xaggee Iska Shabahaan?
Waabaa saddex arday Isku fasal ahaayeen, oo isku dugsina dhigan jireen. Maalintii dambe ayaa mid ka mid ah isaga oo iskuulkii usoo socda ayaa waxaa ka lumay shillinkii uu nusu saaca ah u watay, mid ka mid ah saaxibadii ayaa soo gaadhay oo weydiiyey wuxuu raadinayo? Wuxuu u sheegay in shilling ka lumay oo uu shillinkaas raadinayo. Ninkii ardayga ahaa saaxiibkiisii kale kama tegine shillinkii ayuu la baadi goobay, aad bay labadii arday shillinkii u baadi goobeen, hasa yeeshee waa waayeen. Markii ay quus ka istaageen ayey iska tageen, oo dugsigii iska aadeen. Maanta oo dhan markii ay shillinka raadinayeen waa arkayeen mid ardaydooda ka
mid ah, oo sida sanamka wadada dhexdiisa taagan oo aan juuq jaaq toona lahayn. Hasa yeeshee kuma aysan darsan oo marba dhinac ayey ka dhaafeen. Markii ay dugsigii aadeen, ayaa kii meesha taaganaa isna ka daba tagay oo dugsigii aaday. Markii ay dugsigii tageen ayuu macalinkii yidhi war xaggee ku Habsaanteen oo aad xiisada kaga soo daahdeen, ayuu mid kasta gaarkiisa u weydiiyey. Kii shillinku ka lumay ayaa hadalkii bilaabay oo yidhi; “Macalin shilinkii aan u soo qaatay nusa saacaha ayaa iga lumay, kaas ayaan raadintiisa ku habsaamay”,
Kii labaad ayaa isna hadalkii qaatay oo yidhi “Ana macalin waxaan ku habsaamay ninkan saaxiibkay ee shillinku ka lumay ayaan shillinka la baadi goobayey oo aan la raadinayey”,
Kii saddexaad ayaa la weydiiyey war adna xaggaa ku habsaantay? Wxuu ku jawaabay “macalin waxaan ku habsaamay aniguna, ninkan saaxiibkay Shillinkii ka lumay ayaan ku taagnaa oo aan ka qarinayey”. Haatan arrinta icitraafka Soomaaliland Isaaq wuu ka lumay oo wuu raadinayaa, Geda-buursina waa la baadi-goobayaa saaxiibkii, Hartina waa ku taagan yahay oo wuu qarinayaa.
W/Q: Maxamed Cabdicasiis Cali Jiidaal “Maan-Quudiye”
(KAFTAN BILAA TURXAAN AH)